के भन्छन् "साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार"का लागि छानिएका स्रष्टाहरू ? | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट प्रकाशित १५ बैशाख २०७८ १७:०१
यहाँ डुमेराे (उपन्यास), काेग्ले (संस्मरण) र जीवन नदीकाे किनारै किनार (कवितासङ्ग्रह) का स्रष्टासँगको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. डुमेराे (उपन्यास) – सरला गाैतम
पहिलो कृतिले कदरस्वरुप पाएको यो मुल्याङ्कनले हौसला दिएको छ । कठिन समयमा पनि लेख्ने जाँगर थपिदिएको छ ।
अचानक समाचार देख्दा खुसी भएँ । पत्रकारिता र लेखनको सुरुवातदेखि नै कहिल्यै पनि पुरस्कारको लागि धौडधुप गरिनँ । पाठकहरुले दिएको माया र प्रतिक्रियालाई नै पुरस्कार मानेर काम गरिरहेको छु । गरिरहने पनि छु । स्वःस्फुर्त कसैले आफ्नो सृजनालाई सम्झिदा भने मन खुसी हुने रहेछ । यसलाई मैले आगामी लेखनको लागि हौसलाको रुपमा लिएकी छु ।
कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो कामलाई सम्झेर माया गर्नुले खास अर्थ राख्छ । लेखनमा नयाँ नभए पनि साहित्यमा मेरो आगमन पहिलो हो । पहिलो पाइलाले हौसला पाँउदा स्वतः दोश्रो पाइला चाल्ने उर्जा मिल्छ । आगामी पाइलाको लागि बल प्रदान गरेको छ ।
पत्रकारिता र कृति लेखन मैले सँगै अघि बढाएँ । दुबै मिल्दाजुल्दा काम हुन्, र पनि मन र मस्तिष्कले एक खालको दुनियाँबाट अर्को दुनियाँमा प्रवेश गर्नुपर्दथ्यो । यो रोमान्चक र चुनौतिपूर्ण दुबै थियो । पत्रकारिताको सिलसिलामा गरेको अध्ययन, अनुसन्धान र लेखन मेरो पुस्तकको लागि खुराक बने । डुमेरो ले-आउटमा जाँदै गर्दा म शंखुवासभाको भोटखोलामा पैदल हिँड्दै थिए । कल्पना र यथार्थको सङ्गम पुस्तकमा जस्तै जीवनमा पनि थियो । कृतिका पात्रहरु दिमागमा सलबलाउँदा म बेग्लै दुनियाँमा पुग्थेँ ।
आफैँले खडा गरेका पात्रहरुसँग एक किसमको प्रेममा पर्थेँ । भौतिक जीवन एक किसिमको बाँच्थेँ, काल्पनिक जीवन अर्को रङको हुन्थ्यो । अरुले बनाएको संसार र आफूले बनाएको आख्यानको संसारमा म पालैपालो विचरण गर्थेँ । कृतिसँग मिल्ने जे कुरा भेट्थेँ, टिप्थेँ । नोट गर्थेँ । बगैँचामा विस्तारै विस्तारै फूलहरु थपेजस्तो पुस्तकमा ज्यान भरिरहन्थे ।
तयारीको अवस्था र लेखनको अवस्था कृतिको लागि एक यात्रा हो । पुस्तक लक्ष्य हो । लक्ष्यमा पुग्दा जति रमाएँ, यात्रा गरिरहँदा पनि उस्तै रमाइरहेकी थिएँ, उतारचढाव पनि यात्राको सम्पति हो । पहिलो कृति लेखनको अनुभुति गहिरो र आत्मीय रह्यो ।
“डुमेरो” नै किन लेख्नु भयो ? पाठकले किन पढ्ने ?
मेरै पुस्तकको कारण संसार बद्लियोस् भनेर डुमेरो लेखेको होइन । मेरो समयको कथालाई एउटा फ्रेममा कैद गर्न मन लाग्यो । हरेक मान्छेले कथा बोकेर हिँडेको हुन्छ । मैले पढ्ने पुस्तकहरुमा आफूले बाँचेको कथा म भेट्दिन थिएँ । संसारमा जति उत्कृष्ठ कथाहरु भए पनि मानिसलाई आफ्नो हृदयमा पिँजडाभित्र, चरीसरि लुकेर बसेको कथा मन पर्छ । नयाँ समयको नयाँ चुनौति र अवसर छन् । केही गर्छु भनेर घर छोडेर हिँड्ने मानिसहरु जब नौलो संसारमा पुग्छन्, एकपटक होइन अनेकपटक बिजुलीको झड्का महसुस गर्छन् ।
केटीहरुले त झनै नदेखिने युद्ध पलपलमा लडिरहेका हुन्छन् । आमरुपमा नेपाली साहित्यमा नलेखीएको नयाँ समयको कथा पढ्न रुचि हुने पाठकको लागि डुमेरो रुचिकर हुन सक्ला कि । यही कारण पढ्नुहोला भन्छु । आफ्नो पुस्तक यसकारण पढ्नुस् भनेर उर्दी दिन म को हुँ र ? मेरो पुस्तकको लागि समय निकालेर पढिदिनु भयो भने खुसी अवश्य हुन्छु ।
लेखनमै हुनेछु । आख्यान वा गैरआख्यान, काम गर्दै गएपछि थाहा दिउँला । म गैरआख्यान पनि उत्तिकै मन पराउने मानिस हुँ ।
अचानक आएको प्रश्न हुनाले केही सोचेको छैन । आफ्नो वा अरु कसैको पठपाठनकै योजनामा लगाउँछु होला । पुस्तकालयमा खर्च गर्न मन छ । निजी होस वा सार्वजनिक । पठनपाठनको कामबाहेक पुरस्कारको पैसा अन्त लगाउदिनँ ।
२. काेग्ले (संस्मरण) – प्रेमबहादुर बाेहरा
खुसी छु ।
थप लेखनका लागि उत्साह दिएकाे छ । र जिम्मेवार पनि बनाएकाे छ ।
लेख्नु मेराे लागि रुचि र भावनाको सहज अभिव्यक्ति हाे । तर पुस्तक नै लेख्नु एक जटिल प्रक्रिया रहेछ । र जानेकाे कुरा लेखिनेभन्दा पनि लेख्नु आफैँमा एक खाेज रहेछ भन्ने कुरा लेखन प्रक्रियामा महसुस गरेँ ।
“काेग्ले” नै किन लेख्नु भयो ? पाठकले किन पढ्ने ?
कुनै कुराप्रतिकाे नजर फेरिँदा त्यसले जीवन प्रतिकाे साेच नै बदलिदिने रहेछ । यस्तै जीवनका भाेगाइ अर्थात उत्तरचढावहरुकाे एक अंश हाे, याे पुस्तक ।
आफूले लेखेकाे पुस्तक पाठकहरुले रुचाइदिँदा उत्साह थपिदाे रहेछ । अझै धेरैले पढिदिउन् भन्ने लाग्दाे रहेछ ।
साहित्यिकभन्दा पनि लेखन यात्रा भनाैं, जुन निरन्तर जारी राख्ने काेसिस रहनेछ ।
पठन र लेखन संस्कृतिकाे प्रवर्द्धन र विकासमा लगानी हुनेछ ।
३. जीवन नदीकाे किनारै किनार (कवितासङ्ग्रह) – नमिता दवाडी
तपाईँको पहिलो कृति “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि शीर्ष दश पुस्तकमा पर्यो । कस्तो अनुभूत गरिरहनुभएको छ ?
अति गौरवान्वित छु। आफ्नाहरूबाट आफू नै बिरानो जस्तो भैसकेको यो बेला , परदेशबाट जन्मेको मेरो पहिलो कृतिले पाठक पाउला ? समीक्षकहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउला ?, भन्ने खुल्दुली भइरहेको थियो । कृति विमोचनपछि केही पाठक, समिक्षकहरूका प्रतिक्रियामा रमाउँदै थिएँ, अर्को खुसीको पोको थमाइदिएको छ यो खबरले ।
यो प्रेरणाको खाँबो बनेको छ, र समाउँदै समाउँदै साहित्य क्षेत्रमा परसम्म पुग्ने आशा पलाएको छ । मन्दिरमा कोपिला नचढाइएजस्तै, पहिलो कृतिले साहित्य धाममा स्थान पाउन नसकेको यो अप्ठेरो समयमा मेरो कृतिको थोरै भए पनि आफ्नो परिचय बनेको छ। यसले लेखनमा अरु हौसला बढाएको छ ।
कविता लेख्दै थिएँ, सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्थेँ, पाठकहरुको मीठो हौसलात्मक प्रतिक्रिया आइरहन्थ्यो, केही अनलाइन पोर्टल, त्रैमासिक पत्रिका, साप्ताहिक र साहित्यिक पत्रिकाहरुले पनि छापिरहेका थिए । लकडाउनको समयमा अलि बढी नै पढिए मेरा कविता, र निरन्तर आउन थाले सुझाव- अब सङ्ग्रहित हुनुपर्छ कविता भनेर । हुन त हृदयको कुनामा कता कता गहिरो रहर थियो मलाई पनि नेपाली साहित्य जगतका लागि मैले पनि छोडेर जाने केही होस् । यस्तैमा आदरणीय दाजु बिरेन्द्र केसीसँग भेट भयो, पुस्तक निकाल्नेसम्मको कुरा भयो, र उहाँले सुझाउनु भयो – एक चीरपरिचित नाम, अश्विनी कोइराला । उहाँकै सम्पादनमा सङ्ग्रह तयार भएपछि यो प्रकाशनमा गएको हो ।
“जीवन नदीको किनारै किनार ” नै किन लेख्नु भयो ? पाठकले किन पढ्ने ?
मेरो कवितासङ्ग्रह नै जीवन र जगतको किनारै किनार बहिरहेको छ, कहिले फिँजारिएर जँघारमा मुस्कुराउँदै झरेको छ त कहिले कोकेराहरुमा फँस्दै र निस्किँदै चोटरुले दुख्दै बहेको छ। त्यसैले लेखिदिएँ पुस्तकको नाम अमेट हरफमा “जीवन नदीको किनारै किनार “। पाठकले किन पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कसैले नलेखेको मैले लेखेको छु भन्दिनँ, यति भन्छु, मेरो मुटु निचोरेर अति सरल हिसाबमा सारिदिएकी छु पानाहरुमा । आशा छ, यसले हजुरको मुटु अवश्य छुनेछ । यसैका लागि पढिन्छ नि साहित्य होइन ?
गद्य कविता मुटुमा गडेको छ, छेउ छेउमा बसेर आख्यानले पनि खुबै काउकुती लगाइरहन्छ। स्वच्छन्द गजलसङ्ग्रह प्रकान्सोन्मुख छ । केही कथाहरु लेखेकी छु र केहीको परिकल्पना हुँदैछ । साहित्यका यिनै आयामहरुमा बाँकी जिन्दगी भुलाइदिन मन छ । अरु भगवान्को हातमा छ।
साहित्य उन्नयनका लागि भिन्न संघ संस्थाहरुमा आफैँ संलग्न भएर साहित्यिक कार्यक्रम गरेको हुनाले साहित्य उन्नयनमा अर्थको महत्त्व राम्ररी बुझेकी छु । जीवन र जगतमा घोत्लिरहँदा, लेखिरहँदा, साँच्चिकै आर्थिक हिसाबले सहयोग गर्नु पर्ने अशक्त साहित्यिक मनहरु पनि भेटेकी छु । मैले मेरो पहिलो कृति सेवाभावमा चढाइसकेकी छु, र यसले साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार जित्यो भने यसबाट प्राप्त नगद पनि अति पारदर्शी ढङ्गले साहित्य विकास र मानव सेवामा नै खर्च गर्नेछु ।
डायस्पोरिक ‘उबर’ बजारमा